China manamboatra lamba famaohana landihazo azo amidy | Lonovae
Ny servieta vita amin'ny landihazo azo ampiasaina dia manomboka ny revolisiona amin'ny tarehy madio fa tsy ny fomba nentim-paharazana. Malemy ho an'ny vatantsika izy io ary azo averina ahodina sy hitahiry loharano.
Fanary landihazo malefaka vita amin'ny tarehy azo ampiasaina tsara. Izy io dia tonga lafatra mba hamahana ny fahasahiranana amin'ny lamba famaohana mahazatra amin'ny fitsidihana. Ary mety sy ara-pahasalamana izy io.
Mando sy maina mampiasa lamba famaohana landihazo indroa izahay dia tsara kokoa noho ny hafa. Tsy mifoka sigara mainty izy rehefa mirehitra ary tsy manana vovoka manidina. Inona koa, matevina kokoa izy io.
Anaran'ny famokarana Servieta landihazo azo esorina ； mamafa tarehy tarehy
（Lamina （lamina） Voahangy, tsipika EF, lelafo, fona, lemaka
Halava ny pc tsirairay 20-22cm
Ny sakan'ny pc tsirairay 20-22cm
Quantity isaky ny horonana Pcs100pcs
Gsm isaky ny horonana Manodidina ny 400 g
Fitaovana Cotton ； Tsy tenona
Fampiasana Fanadiovana tarehy
Fampiharana Homecare na indostrian'ny hatsaran-tarehy
Ny lamba famaohana tarehy azo esorina dia vokatra fanadiovana fanary, vita amin'ny fibre landihazo, malefaka malefaka, henjana ary tsy misy loko. Ny fomba fampiasana dia isan-karazany, toy ny fanasana tarehy, fanasana tarehy, fanesorana makiazy, fikosehana sns. Misy vokany madio sy madio.
Ny lamba famaohana tarehy azo esorina dia mizara fomba roa: karazana horonana sy karazana azo esorina. Misy karazany telo: lamina perila, lamina tsara harato ary lamina tsotra. Ny fomba samihafa dia mety amin'ny karazany amin'ny hoditra.
Izy io koa dia azo ampiasaina indray hanadiovana zavatra rehefa avy nanasa tarehy.
Mando sy maina mampiasa lamba famaohana landihazo indroa izahay dia tsara kokoa noho ny hafa. Tsy mifoka sigara mainty izy rehefa mirehitra ary tsy manana vovoka manidina. Ary koa, matevina kokoa izy io.
Ny lamba famaohana tarehy azo esorina dia vita amin'ny akora vita amin'ny landihazo, izay manana ny toetran'ny tsy mitroka, avoakan'ny rano mahery, malefaka matanjaka ary malefaka tsara. Manana tombony tsy manam-paharoa amin'ny servieta. Mando sy maizina ny trano fandroana, ary mora miteraka bakteria ny lamba famaohana ary ny mites dia mety hiteraka allergy amin'ny hoditra sy mony. Ny lamba famaohana tarehy azo esorina dia misy fotoana fohy ampiasaina, maloto hoditra, malefaka ary madio ary mora entina amin'ny dia. Amin'ny fampiasana ny fizotran'ny hafanana avo lenta, tsy misy fanampiana simika azo antoka sy ara-pahasalamana.
Ary manangana mpamokatra lamba vita amin'ny lamba tsy tenona amin'ny taona 2019 izahay toy ny lamba famaohana landy, lamba latabatra sns. Ny tanjonay dia ny fahatsapana fahasalamana, fahadiovana ary fampiononana ho an'ny revolisiona ho an'ny tokantrano sy ny toetra.
Teo aloha: Fehin-kibo manala fehikibo PP
Manaraka: Lamba famaohana fanadiovan-dakozia azo ampiasaina